Raw Raw Zvekuongorora - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Hunhu mbishi zvigadzirwa zvichave nyore kubudirira. Fly ash, Tailings, Kuvaka tsvina, Shale, Rwizi silt, Waste ivhu, Loess, Hupenyu sludge, Gangue.
Basa repuraimari rekumisa chirimwa chezvidhinha: Izvo zvigadzirwa zvemakemikari ekuumbwa uye zvimiro zvemuviri (kusanganisira kupisa kwemukati kwemukati, nezvimwewo) kuyedzwa, ukuwo kuyera hunyoro hwezvidhina zvakasvibira zvinoumba & extrusion.
Chemical kuumbwa ongororo inowanzo kuyerwa seSiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, magnesium oxide, sulfur gangue, kurasikirwa pamoto uye nezvimwe.
SiO2: Zvemukati zvakakurisa, pasi mapurasitiki, kunyange hazvo zvakanaka kukurumidza-kuomesa, zvisinei izvo zvigadzirwa zvakapedzwa zvine yakaderera compressive simba.
Al2O3: Kana iri pasi pe12%, simba remuchina rezvigadzirwa rakaderedzwa, kana anopfuura 24%, kupisa kwekupisa kuri kuwedzera, kuwedzera huwandu hwemarasha.
Fe2O3: Zvemukati zvakanyanyisa zvinodzora zvigadzirwa zvinodzora, zvichikonzera kudzikira kwekushisa sintering.
CaO: Kuendesa Mune imwe nzvimbo yeCaCo3 mune zvakasvibirira zvinhu, zvakaiswa muzvinhu zvine njodzi, Kana zvimedu zvakakura kupfuura 2mm, zvinogona kukonzeresa zvidhinha kana kuputika kana ichitsva.
MgO: Izvo zvishoma zvirinani, zvikasadaro, zvigadzirwa zvinokura zviri nyore zvinogadzira magnesium, zvichikonzera chena hoarfrost.
Sulphur Dagan: Kuva sulphate mune yakasvibirira zvinhu, zvirimo hazvifanire kudarika 1%. Kana ichipisa, ichaita SO2 uye kukanganisa corrode yekugadzira michina, zvinokuvadza kune hutano hwevashandi.
Kurasikirwa pakutsvaira: Zvinokonzereswa nemakemikari muzvinhu zvakasvibirira. Kana kukwirira kurasikirwa pakuririma, yakawanda mwena mwero wezvigadzirwa.
Chemical Chikamu SiO2 Inokodzera 55 ～ 70
Inowanikwa 55 ～ 80
Al2O3 Inokodzera 15 ～ 20
Inowanikwa 10 ～ 25
Fe2O3 Inokodzera 4 ～ 10
Inowanikwa 3 ～ 15
CaO Inowanikwa 0 ～ 10
MgO Inowanikwa 0 ～ 3
SO3 Inowanikwa 0 ～ 1
kurasikirwa pakutsva Inowanikwa 3 ～ 15
Calcareous Zvemukati ＜ 0.5mm Inokodzera 0 ～ 25
2, 0.5mm Inowanikwa 0 ～ 2
Zvepanyama Performance Kuongorora: Kazhinji kuyera zvidimbu zvakanyorwa, plastiki, shrinkage, kuomesa kunzwisisika uye kugona sinter.
Mapurasitiki: Kana plastiki index iri muna 7 ~ 15, inonyanya kukodzera yepakati epurasitiki madhaka extrusion.
Shrinkage: Linear shrinkage <6%, kana yakanyanyisa kukwira zvigadzirwa, zvichikanganisa mhando yezvidhina.
Kuomesa kunzwisisika: Iyo yakakwira mbishi zvinhu zvepurasitiki, iyo yakanakisa yezvimedu, zvakare yakakwira yekuoma kwekunzwa. Kunzwisisa kwekukwana kunogadzira kuomesa maitiro dhizaini, yakanyanyisa kukonzeresa zvidhinha zvakasvibira 'pamusoro kutsemuka.
Hukama hwekuumba hunyoro zvemukati uye nekuomesa kunzwisisika
Green zvidhina kuumbwa mwando
Mvura yakakosha yezvidhinha zvakasvibirira
Kuomesa kunzwisisika mwero
Kemikari kuongororwa kwezvinhu zvakasvibirira, zvimiro zvemuviri uye bvunzo kuumba hunyoro hunosarudza kugona kwekushandisa mbishi zvinhu uye zvinokanganisa inotevera dhizaini dhizaini, kusarudzwa kwemidziyo, dhizaini dhizaini, mhando yechigadzirwa uye zvimwe zvinhu zvegadziriro.